दिल्ली र चेन्नईको खेल आज : दिल्ली ईतिहास रच्ने दाउमा – onlinekhelkhabar.com
दिल्ली र चेन्नईको खेल आज : दिल्ली ईतिहास रच्ने दाउमा
बैशाख २७ ,अनलाईन खेलखबर ।। ईन्डियन प्रिमियर लिग ( आईपिएल )अन्तर्गत फाईनल प्रवेशद्रारका रुपमा रहेको दोस्रो क्वालिफायरमा आज दिल्ली क्यापिटत्सले चेन्नई सुपर किग्सको सामना गर्दैछ ।
आईपिएलको सफल टिम मध्यको एक चेन्नई र आईपिएलमा यसघि कमजोर मानिने दिल्लीले प्रतिष्पर्दा आज शुक्रबार गर्दैछन । जित्ने टिमले आईतबार हुने फाईनल खेलमा मुम्बई ईण्डियनको सामना गर्नेछ ।
खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने ८ बजेपछि चेन्नईको बैकल्पिक मैदान डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियममा हुनेछ ।
दरिलो ईतिहास रहेको चेन्नईलाई ईतिहास बनाउन लालाहित दिल्लीले आज हुने दोस्रो क्वालिफायरमा कडा टक्कर पक्कै दिनेछ । लिग चरणमा दिल्लीले राम्रो प्रदशन गर्दै कुल १४ खेलबाट ९ खेलमा जित र ५ खेलमा हार व्यहोर्दै अंकतालिकामा १८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहदै ७ बर्षपछी दिल्लीले प्ले अफमा स्थान बनाएको थियो । पहिलो मुम्बई र दोस्रो चेन्नई सँग समान १८ रन भएपनि दिल्ली नेट रनरेटमा पछि पर्दै तेस्रो स्थानमा रहदै एलिमिनेटरको यात्रा तय गरेको थियो ।
खेल हुनु पूर्व सन्धामा नेपालमा सन्दिपलाई लिएर ठुलो चासो र खुलदुली रहने गर्छ । टिमले आज सन्दिपलाई अन्तिम ११ मा स्थान दिन्छ या दिदैंन भनेर सोहि कुरा आज चेन्नई बिरुद्दको खेलमा पनि निरन्तरता पाईसकेको अबस्था छ । अघिल्लो खेल पनि गुमाएका उनले यो खेल पनि गुमाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।जारि प्रतियोगितामा ६ खेल खेलेका सन्दिपले ८ विकेट लिईसकेका छन ।
Previous Post२ मिनेटमै सकियो आईपिएल फाईनलको टिकट
Next Postचेन्नई बिरुद्द सन्दीप नखेल्ने